အမျိုးသားနေကာမျက်မှန် - THE INDIAN FACE
စုစည်းမှု - အမျိုးသားနေကာမျက်မှန်
Freeride အနက်ရောင် / အနက်ရောင်
ဖြစ်ပွားအနက်ရောင် / အနက်ရောင်
Freeride Wood က / ဘရောင်း
Polar လိပ် / အစိမ်း
Free Spirit Black က / အပြာရောင်
Free Spirit Black က / နီ
Free Spirit အနက်ရောင် / အနက်ရောင်
Kahoa အနက် / အနီရောင်
အနက်ရောင် / အနက်ရောင်နယ်စပ်
Free Spirit အစိမ်း / အနက်ရောင်
Freeride လိပ် / အစိမ်းရောင်
အနက်ရောင် / အပြာရောင်နယ်စပ်
Freeride အပြာရောင် / အနက်ရောင်
Kahoa အစိမ်းရောင်မီးခိုးမြူ / Black
ရောဂါလိပ် / ဘရောင်း
Kahoa အနက်ရောင် / အနက်ရောင်
အစိမ်းရောင်မီးခိုးမြူများ / အနက်ရောင်ဖြစ်ပွားခြင်း
Freeride က Black / ကြေး
ရောဂါ Black / ကြေး
Polar Black က / ဘရောင်း
Freeride အပြာရောင် / ကြေးဝါ
Kahoa လိပ် / အနက်ရောင်
Kahoa က Black / ကြေး
Frontier ဘရောင်း Camo / အနက်ရောင်
Black က / ကြေးနီနယ်စပ်
Free Spirit အပြာ / အညို
Tortoise / အစိမ်းရောင်နယ်စပ်
Free Spirit camo / အနက်ရောင်
Free Spirit Black က / ဘရောင်း
En The Indian Face ကျနော်တို့နေကာမျက်မှန် collection များကိုကမ်းလှမ်းအပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏ်ယူပါတယ် polarသင့်ရဲ့လေ့လာရေးခရီးများနှင့်အားကစားဆိုင်ရာစွန့်စားမှုအားလုံးတွင်သင့်အားလိုက်ပါရန်သုတ်ပိုးမွှားများဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးနေကာမျက်မှန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်နေကာမျက်မှန်မော်ဒယ်များကိုတီထွင်ခြင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူသည် polarသင်၏အားကစားအချိန်များနှင့်သင့်နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်အမျိုးသားများအတွက် izas ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန် polarအမျိုးသားအမြှောက်များသည်အပြေးပြိုင်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်အခြားအစွန်းရောက်ခြင်းနှင့်စွန့်စားမှုဆိုင်ရာအားကစားများအပါအ ၀ င်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအားကစားသမားများ၏လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်ကိုပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်၊ အထူးသဖြင့် ၄ င်းတို့၏စျေးနှုန်း / အရည်အသွေးအချိုးအစားနှင့်၎င်းတို့ကိုဖြည့်စွက်သည့်နည်းလမ်းများအတွက် မတ်မတ် ကွန်ကရစ်, ဒီဖြစ်လိမ့်မည် athleisure o မတော်တဆဖြစ်သော.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးခုခံနိုင်မှုနှင့်ပေါ့ပါးသော polycarbonate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်အားကစားနှင့်ပုံမှန်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းကို ၁၅ နှစ်ကျော်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံအားယုံကြည်စိတ်ချရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ နှင့်လုံခြုံ။ အမျိုးသားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းနေကာမျက်မှန်အရောင်းဆိုင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကာအကွယ်ပေးထားသောနေကာမျက်မှန်အမျိုးမျိုးကိုအာမခံထားသည် UV400.
En The Indian Face ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအားကစားပစ္စည်းများနှင့်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်များဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အားကစားသမားများမွေးဖွားလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးတွင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးသားဖက်ရှင် ဦး ထုပ်၊ နာရီနှင့်နေကာမျက်မှန်များ၏ထူးခြားသောစတိုင်လ်ရှိသည်။ အလားတူပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်အညီအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်တံဆိပ်များမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိန္ဒိယဝိညာဉ်များသည်စွန့်စားမှုအားကစားနှင့်အစွန်းရောက်အားကစားများကိုလေ့ကျင့်သည့်အခါကွဲပြားခြားနားသောရာသီဥတုအခြေအနေများကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်အထူးထုတ်လုပ်ထားသောခေတ်မီအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်များနှင့်အားကစားဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားစီးနေကာမျက်မှန်အရောင်းဆိုင်သို့သွားပြီးသင်နှစ်သက်သောအရာနှစ်စုံကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သို့မှသာသင်သည်သင်၏ရူပါရုံကိုဂရုစိုက်ပြီးအမြဲတမ်းဖက်ရှင်ဆန်ဆန်ရှိနေမည်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအားကစားကိုလေ့ကျင့်နေမည်လား၊
သူတို့ဟာမှန်ဘီလူးစစ်ထားတဲ့မျက်မှန်တွေပါ vertical ၎င်းသည်နေရောင်မှအလင်းရောင်ကို ဖြတ်၍ မျက်စိကိုအလျားလိုက်ရောက်ရှိစေသည်။
နေကာမျက်မှန်များ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူး polarနေရောင်မှထုတ်လုပ်သောဓါတ်ရောင်ခြည်များမှသင့်အားအကာအကွယ်ပေးသည့်အခါ hoists သည်သင်၏အမြင်ကို ပိုမို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအနားယူရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူတို့သည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအားလုံခြုံစိတ်ချရလွယ်ကူသောအမြင်အာရုံဖြင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်။
နေကာမျက်မှန် polarMan hoists သည်အထူးသဖြင့်အလျားလိုက်၊
နေကာမျက်မှန် polarအထီးတငျမွှောကျပို။ ထက်မြက်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုပေး။
နေကာမျက်မှန် polarMan hoists သည်သဘာဝနှင့် primal အရောင်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်မျက်လုံးနှင့်လေ့ကျင့်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။
အနည်းဆုံးတော့မဟုတ်ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့မျက်မှန်စစ်ထုတ်ခြင်း polarလူတစ် ဦး အားအခြားအရေးကြီးသည့်စစ်ထုတ်စက်များနှင့်ပေါင်းစပ်။ ဥပမာအားဖြင့်မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်စစ်ထုတ်စက်များနှင့်ဥပဒေအရမဖြစ်မနေဖြည့်ထားသော UV filter များကို၎င်းတို့အားအပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးသည်။
နေကာမျက်မှန် polarချည်ထားသောယောက်ျားသည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့အား EU မှ UV 400 ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ အခြားသူများကသင့်အားနေရောင်မှကာကွယ်ရန်နှင့်သင်၏အမြင်အာရုံကိုတစ်ပြိုင်တည်းသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်တစ်ပြိုင်နက်တည်းထိန်းသိမ်းထားရန်မထိုက်တန်ပါ။ ပြင်ပအားကစားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်စွန့်စားမှုအားကစား၌တည်၏။
အကယ်၍ သင်သည်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်ကိုဝတ်ဆင်လိုပါက၊ သင့်အတွက်မည်သူသည်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားများအတွက်စတုရန်းနေကာမျက်မှန်များသို့မဟုတ်အမျိုးသားများအတွက်ပတ် ၀ န်းကျင်နေကာမျက်မှန်များကိုစဉ်းစားပါ။ သင်လုပ်ဆောင်မည့်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းစဉ်းစားသင့်သည် အိမ်တွင်း ဒါမှမဟုတ်လျှင် အိမ့်ပြင်တွင်နေ့ဖြစ်စေ၊ ညဖြစ်စေ၊ နွေရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်အရောင်းဆိုင်တွင် ၀ ယ်သောအခါဤအချက်များအားလုံးသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးသည်။
သင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိလျှင်အမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်ကိုဝယ်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့အီးယူထောက်ခံချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ကိုဝယ်သင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်နေကာမျက်မှန်များဖြစ်ကြောင်းမ ၀ ယ်ခင် ကြိုတင်၍ အတည်ပြုရမည် polarအကာအကွယ်နှင့်အတူတင်ယောက်ျား UV400ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောအမျိုးသားများ၏အွန်လိုင်းနေကာမျက်မှန်များအပြင် သင်သည်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်ကိုဝယ်ယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်အားနေရောင်ခြည်၏ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များမှအမှန်တကယ်ကာကွယ်နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်အမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ကိုမဝယ်ခင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုအမြဲတမ်းသတိထားပါ။ ခင်ဗျားဟာနေကာမျက်မှန်၊ စတုရန်းနေကာမျက်မှန် (သို့) ခေတ်မှီနေကာမျက်မှန်များကို ၀ တ်ဆင်သောလူ၏စတိုင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏အမျိုးသားဖက်ရှင်နေကာမျက်မှန်သည်သင်သိသလား။ လူအများစုကအမျိုးသားများသည်သူတို့အသုံးပြုသောကျပန်းသို့မဟုတ်အားကစားပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ရန်အချိန်မဖြုန်းပါဟုယုံကြည်ကြသည်၊ သို့သော်ဤယူဆချက်သည်မမှန်ကန်ပါ။
အမျိုးသားများသည်နေကာမျက်မှန်ကို ၀ ယ်ပြီး ၀ တ်ဆင်သည်။
အမျိုးသားဖက်ရှင်နေကာမျက်မှန်များသည်ဥရောပတိုက်ရှိရောင်းအားအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းယောက်ျား၏နေကာမျက်မှန်အရောင်းဆိုင်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာ ၀ ယ်ယူရန်ရည်ရွယ်သည့်အွန်လိုင်းယောက်ျား၏နေကာမျက်မှန်အရောင်းဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများကိုပေးရန်
In The Indian Face အမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ကိုဝယ်နိုင်ပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်အရောင်းဆိုင်တွင်သင်သည်အမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်နှင့်အားကစားဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်ကို ၀ ယ်ယူရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
In The Indian Face အမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ကိုဝယ်ချင်ပါသလား
ကျွန်ုပ်တို့၏ထွက်ပေါက်ကဏ္တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောအမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာတွင်သင်ပါ ၀ င်ပါကသင်မယုံကြည်နိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ပရိုမိုးရှင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်များကိုအမျိုးအစားတစ်ခုစီအလိုက်ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်။
အကောင်းဆုံးအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်များသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းပေါ့ပါးသည့်ပစ္စည်းများဖြင့်သူတို့၏အမျိုးအစားတွင်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်သောသူများဖြစ်သည်။ In The Indian Face ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးအချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုး၌သင်တွေ့သောအရာများသည်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ဖြစ်ပြီးအီးယူမှအသိအမှတ်ပြုသည်။
အမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်ပါသလဲ The Indian Face?
အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်သော frame နှင့် unisex style များရှိအမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်။
TAC မျက်ကပ်မှန်များနှင့်ခေတ်မီအမျိုးသားမျက်မှန်များ Polarမြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လှစ်
CAT.3 မှန်ဘီလူးများနှင့် UV-400 ကာကွယ်သောအမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်များ။
အမြင့်ဆုံးအလင်းရောင်နှင့်ခုခံနိုင်မှုရှိသော polycarbonate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘောင်နှင့်အတူအမျိုးသားဖက်ရှင်နေကာမျက်မှန်။
Gafas က de sol polarလူကိုအပိုအားကောင်းတဲ့တိုက်တေနီယမ်ပတ္နှင့်အတူရုပ်သိမ်း
ကျွန်ုပ်တို့၏နေကာမျက်မှန်စုဆောင်းခြင်း polarတငျမွှောကျလူကိုအမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့်အရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်များတွင်အမျိုးသားများ၏ပတ် ၀ န်းကျင်နေကာမျက်မှန်၊ အမျိုးသားစတုရန်းနေကာမျက်မှန်နှင့်ခေတ်သစ်အမျိုးသားနေကာမျက်မှန်နှင့်အမျိုးသားဖက်ရှင်နေကာမျက်မှန်တို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
နေကာမျက်မှန်စတိုးဆိုင်ကဘယ်လိုလဲ The Indian Face?
The Indian Face ဒစ်ဂျစ်တယ်နေကာမျက်မှန်တံဆိပ်ဖြစ်သည် polarမွှေးထားသောလူ, ငါတို့နေကာမျက်မှန်အားလုံးမော်ဒယ်များရောင်း polarကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းအမျိုးသားရဲ့နေကာမျက်မှန်အရောင်းဆိုင်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိလူသိအများဆုံးမျက်စိအထူးကုဆရာဝန်အချို့တွင်လည်းရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သောအမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်များကိုအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အမျိုးသားအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်အရောင်းအဝယ်ကမ်းလှမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားနေကာမျက်မှန်အရောင်းဌာနတွင်။
En The Indian Face ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာလူတိုင်းမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်သောအမျိုးသားများ၏ပတ် ၀ န်းကျင်နေကာမျက်မှန်နှင့်အမျိုးသားစတုရန်းနေကာမျက်မှန်စုဆောင်းမှုများကိုဖန်တီးရန်မျက်မှန်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလေ့လာရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။ ၀ ယ်ခြင်းကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံခဲ့ကြသည့်အားကစားသမားများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ၀ ယ်ယူခဲ့သောလူနေမှုပုံစံမတူသည့်မြို့ပြလူနေမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနှစ်မျိုးစလုံးသည်သူတို့၏နေကာမျက်မှန်ဝယ်ခြင်းအပေါ်အလွန်ကျေနပ်အားရကြသည်။ polarထို့ကြောင့်သူတို့အမျိုးသားအွန်လိုင်းနေကာမျက်မှန်အရောင်းဆိုင်မှကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်များကိုအကြံပြုသည်။
နေကာမျက်မှန်ဝယ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ် polarတင်ယောက်ျား The Indian Face:
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်များ၏သင်၏စျေး ၀ ယ်လှည်းထဲသို့ ၀ င ်၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအားကစားနှင့်ကျပန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ပါ။ သင်နှစ်သက်သောအမျိုးသားဖက်ရှင်နေကာမျက်မှန်များနှင့်သင်၏အားကစားစတိုင်နှင့်ပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိသည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်အထူးလျှော့စျေးကုဒ်ရှိပါက၎င်းကို ၀ ယ်ယူရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ "ကုဒ်နံပါတ်ကုဒ်နံပါတ်ထည့်ပါ" အပိုင်းတွင်ဤနည်းဖြင့်အမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်ကိုအထူးကမ်းလှမ်းမှုများဖြင့်အွန်လိုင်း ၀ ယ်နိုင်သည်။ နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားများ၏နေကာမျက်မှန်အရောင်းဌာနမှအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ကိုဝယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုတွင်သင်သည်အမျိုးသားပတ်ပတ်လည်နေကာမျက်မှန်၊ အမျိုးသားစတုရန်းနေကာမျက်မှန်၊ အမျိုးသားဖက်ရှင်နေကာမျက်မှန်များနှင့်မျက်မှောက်ခေတ်လူများအားလုံးအပါအဝင်အားကစားပုံစံ၊ အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်။
ပြီးဆုံးရန်သင်၏ပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြပါ။ ငွေပေးချေမှုကိုဖြည့်ပါ polarလူသည်သင်ညွှန်ပြသည့်လိပ်စာသို့ရောက်သည်
နိမ့်သောစျေးနှုန်းသေချာပေါက်အရည်အသွေးနိမ့်မဆိုလိုပါကြောင်းသတိရပါ။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုး www တွင်အထူးလျှော့စျေးများနှင့်အတူအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။theindianfaceအထူးသဖြင့်ကျွန်မတို့အမျိုးသားရဲ့နေကာမျက်မှန်အရောင်းကဏ္inမှာ .com ။
En The Indian Face ကျနော်တို့မျက်ကပ်မှန်နှင့်အတူခေတ်သစ်နေကာမျက်မှန်လူရှိသည် polarပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအတွက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးမဆိုအတွက်ဖယ်ရှားပေးခြင်းနှင့် ultra light frames များ။
ခေတ်မီအားကစားသမားတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်စတိုးသို့ ၀ င်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သင်သည်အမျိုးသားများအတွက်စတုရန်းနေကာမျက်မှန်၊ အမျိုးသားများအတွက်ပတ် ၀ န်းကျင်နေကာမျက်မှန်၊ ပုလ်ဒီဇိုင်းများ။
ငါတို့ယောက်ျား၏နေကာမျက်မှန်ဆိုင်သို့သွားရန်မမေ့ပါနှင့်! ကျပန်းနှင့်အားကစားပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများအပြင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားနေကာမျက်မှန်ကမ်းလှမ်းမှုများဖြင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။